Dagaal siyaasadeedka ganacsiga oo Muqdisho ka qarxay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal siyaasadeedka ganacsiga oo Muqdisho ka qarxay
Danta gaarka ah oo la isku fahmi waayay, ayaa maalmaha soo socda waddo u firi karta in qeyb ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed laga kansalo heshiisyo waaweyn oo lagu naasnuujiyay muddo ka hore, si ay shacabka xoolihiisa ugu naaxaan, waxaana todobaadkaan qarxay dagaal kala aargoosi ah oo lugaha la galay gacansiga, kaas oo u dhaxeeya xaafiisyada Farmaajo iyo RW Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii uu bannaanka u soo baxay khilaafka la xariira arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble, isla-markaasna uu Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta ku gacan seyray waraaq ka soo baxday xaafiiska Farmaajo, saddex todotobaad ka hor, waxaa billowday dagaal u dhaxeeya labada xafiis, kaas oo saameyn ku yeeshay heshiisyada qanacsiga ee labada dhinac kala saxiixeen.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa is is-hortaag ku sameeyay heshiis uu Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe, u saxiixay haweeney ganacsato ah, si ay muddo labaatan sano ah ugu ganacsato qeyb ka mid ah dhulka Tiyaatarka Qaraanka,
Dubbe, wuxuu xiriir dhaw la leeyahay Farmaajo, waxaana heshiiskaas qeyb ka ahaa, maareeyaha guud ee Tiyaaatarka, Abawaan Shube, oo Madaxweynaha muddadu ka dhamaatay isku heyb yihiin.
Kooxda Farmaajo, oo ka careysan hab-dhaqanka Ra’iisul Wasaaraha, waxa ay duullaan ku qaadeen, Wasiirka (Idman) ee Xukuumadda Rooble, Cabdullaahi Abuukar Carab, oo ah Wasiirkisa Waxbarashada Soomaaliya, kaas oo heysta heshiisyo waaweyn oo dhul dad-weyne uu qeyb ka yahay muddo dheer.
Kulan ka dhacay Madaxtooyada oo u dhaxeeyay Kooxda Farmaajo oo uu qeyb ka yahay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Cumar Finish, ayaa la isku raacay in laga aar-goosto saaxiibka ugu dhow RW Rooble, Wasiir Carab, lagana wareejiyo Isbitaallada Danta Guud, loogu tala galay ee uu dhaqaalaha xooggan ka helo, sida’ Jazeera iyo Yardimeli oo ku yaalla Muqdisho.
Labada Isbitaal, waxay ku yaallan dhul dowladeed, waxaana lagu dhisay deeq caalami ah, oo ka kala timid Bahrain iyo Turkiga, waxaase lagu naasnuujiyay Ganacsato uu ka mid yahay Wasiirka Waxbarashada, oo xilligaas mas'uul ka ahaa hay’adda Manhal, kuwaas oo muddo ku ganacsada, halkii si bilaash ah loogu adeegi lahaa dad weynaha xaqa u leh.
Maamulka Gobolka Banaadir, oo ay gadaal ka taagan yihiin Farmaajo iyo Dubbe, ayaa shalay amar ku bixiyay in labada Isbitaal lagu soo wareejio Gobolka, si Cabdullaahi Abuukar Carab, oo gacanta midig ee Ra’iisul Wasaaraha ah looga joojiyo heshiisyada Isbitaallada Umudda.
Saacado kar kadib markii amarkaas soo baxay, Xaafiiska Hanti-dhowraha Guud ee Qaranka, oo isna aad ugu dhow RW Rooble, ayaa soo saaray, waraaq lagu qoray hadallo adag, oo si weyn loogu fadeexeeyay Wasirka Warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Dubbe, kaas oo lagu eedeeyay inuu si aan waafaqsanayn nidaamka Dowliga ah, shuruucda dalka iyo wareegtooyinka hay'adaha Dowladda, uu maamulay hantida dhuleed ee Waasaaaradda, (Xatooyo xoolo dadweyne).
Waxaa soo baxaya warar kale, oo sheegaya in labada dhinac ay maalmaha soo socda bannaanka keeni doonaan heshiisyo ganacsi oo hore loo galay, isla-markaana laga laaban doono ku dhawaan 15 heshiis oo darafyadu muddo dhaqaalo xooggan ka helayeen.
Guddoomiya Gobolka Banaadir, waxaa laga hor istaagi doonaa, bixinta heshiisyada dhulalka, waxaana laga laaban doonaa, heshiis uu dhawaan ku bixiyay dhulka Naafada Qaranka ee ka soo hor jeeda Dekedda Muqdisho oo ganacsato u saxiixay.